गायिका प्रिती आले यस्तो अवतारमा देखिए पछि…. – ramechhapkhabar.com
गायिका प्रिती आले यस्तो अवतारमा देखिए पछि….
केहि समय पहिला ब्यापक रुपमा चर्चा कमाएकाे ‘बामरी’ गीत दर्शकले मन पराएपछि उनले ‘बामरी २’ सार्वजनिक गरेकि हुन् । उनका धेरै गितहरु दर्शकले धेरै नै मनपराएका छ्न। उनी सामाजिक संजालमा निकै संक्रिय रहन्छिन् । उनका फ्यान र फलाेङ्ग पनि धेरै छन् । प्रिति,अभीषेक केडेल, नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा अलि फरक धर अनि फरक शैलीमामा गीत गाउने र अलि फरक देखिन चाहाने गायिका हुन् प्रिती आले ।
पछिल्लाे समय काे,राेना,काे माहामारीमा पनि प्रितीले दर्शककाे मन जित्नकाे लागि भने २,४ वटा गीत सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । सबै गितहरु फरक फरक धारका भएपनि समग्रमा सफल नै छन। गायिका प्रितीलाइ भिडियाेमा जस्ताे देखिन्छ, त्याे भन्दा भेट्दा धेरै फरक छिन् । उनकाे भनाइ अनुसार दर्शकले साथ र माया दिनुभयाे भने मलाइ हाैसला बढ्ने छ। यतिबेला निकै नै चर्चा मै रहेकी छिन।
बलिवुड अभिनेत्री तारा सुतारियालाई कोरना संक्रमण
काठमाडौँ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बलिवुड सेलिब्रेटी कोरोना संक्रमित भएका छन् । यसैक्रममा अभिनेत्री तारा सुतारियापनि कोरनाको चपेटामा आएकी छन् ।
फिल्म फेयरका अनुसार हालै फिल तड़पको शुटिंग सकेकी तारालाई कोरोना संक्रमण भएको र उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ ।
बलिवुडका चर्चित निर्देशक मिलन लुथारियाले निर्देशन गरेको फिल्म तड्पमा ताराको अपोजिटमा चर्चित अभिनेता सुनिल शेट्टीका छोरा आहान सेट्टी रहेका छन् । यो फिल्म सेप्टेम्बर २४ मा रिलिज हुदै छ ।
केहि सातादेखि बलिवुडका फिल्मको शुटिंगमा तिब्रता आएसँगै कोरोना संक्रमण पनि बढेको देखिएकोछ । यसअघि चर्चित निर्माता निर्देशक संजयलीला भंसाली, अभिनेता रणवीर कपूर, मनोज बाजपेयी, आशिष विद्यार्थी लगायत संक्रमित भएका छन् । उनीहरु कोहि सेल्फ आइसोलेसनमा र कोहि उपचारमा रहेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।